Etu ịtọ oge ma ọ bụ ngụda na Instagram | Nzukọ Ekwentị
Jesus Sanchez | | Instagram, Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet
Instagram bụ ụwa jupụtara na ohere. Kwa ụbọchị, ngwa ahụ na-etinye arụmọrụ ọhụrụ ka ndị ọrụ jiri ọtụtụ oge na-eji ya. Taa, anyị ga-ekwu maka a nnọọ akpali ọrụ, karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-enwe mmasị ịme ọtụtụ foto na bulite akụkọ. Anyị na-ekwu maka ya foto ngụ oge ma ọ bụ Instagram agụda.
Yabụ, na post a anyị ga-egosi gị otu esi etinye oge na Instagram, ma na iOS na gam akporo mobiles. Nke a ga - enyere anyị aka ime nke anyị akụkọ ma ọ bụ akụkọ bụ ihe mbụ na-adọrọ mmasị maka ndị na-eso ụzọ anyị. Mana tupu ịmalite, kọwaa nke ahụ ebe a ị gaghị ahụ otú ị ga-esi rụọ ọrụ ụdị ọrụ ntanetị oge na-akpaghị aka a foto mgbe ngụda. Lee, anyị ga-ekwu maka «nggụ»Site na Insta.
2 Kedu ihe bụ oge Instagram maka?
2.1 Enwere m ike iji ngụ oge na post m?
3 Etu esi eji oge ahụ na Akụkọ gbasara Instagram
4 Ọrụ ngụ oge nke Instagram abụghị usoro iheomume
Oge foto Instagram bụ a agwakọtara na Akụkọ Instagram dị na akara «Countdown». Ọrụ a na-egosiputa a nggụ nke a na-agbanwe agbanwe agbanwe na onye ọrụ n'onwe ya nwere ike ịgbanwe. A na-eji ya echeta ihe omume ma ọ bụ ihe omume dị mkpa ịchọrọ ịkọrọ ndị na-eso ụzọ gị.
Buru n'uche na akara a enweghị ike iji ya n'ụdị onyonyo ndị ọzọ nke Instagram (dịka akwụkwọ ndị mgbe ochie) ma ọ bụ jiri ya mee ihe ngosi iji see foto. Emegharịla ọrụ a site na otu aha ngwá ọrụ ahụ.
Kedu ihe bụ oge Instagram maka?
N'ezie oge ụfọdụ tụleghachi akụkọ nke ndị enyi gị ị ga-ahụ ụdị labeelu na udi nke a rektangulu na ngụ oge na ngụda na ụbọchị na ha guzosie ike, na aha nke ngụda ahụ.
Anyị nwere ike itinye gị Examplesfọdụ ihe atụ Iji jiri atụmatụ Instagram a mee ka akụkọ gị bụrụ ihe na-adọrọ adọrọ:
Ngụkọta nke gị ụbọchị ọmụmụ.
Nguko si a evento mkpa (egwu, oriri, ememme ...)
Gụọnụ ụbọchị ịhapụ ịhapụ ezumike.
Oge nke ụbọchị fọdụrụ iji mee nke ahụ dị mkpa review.
Enwere m ike iji ngụ oge na post m?
Azịza ya bụ mba. Ọ gaghị ekwe omume iji ya na ọdịnaya nke mbipụta akwụkwọ, n'ụdị nke kpochapụwo posts, ma ọ bụ na-agaghị ekwe omume iji ọrụ na ajụjụ ịtọ a ngụ oge iji na-akpaghị aka na-foto na Instagram.
Etu esi eji oge ahụ na Akụkọ gbasara Instagram
Iji jiri oge ma ọ bụ ngụda nke Instagram On gị gam akporo ma ọ bụ iOS ngwaọrụ, ị ga-eso mfe nzọụkwụ na ị ga-ahụ n'okpuru:
Mepee ngwa Instagram na ngwaọrụ Apple gị.
Pịa na akara ngosi udi ụlọ emi odude ke ufien ufien.
Na-esote, pịa ebe ọ na-ekwu "Akụkọ gị" imeghe onye ndezi akụkọ Instagram
Ozugbo nchịkọta akụkọ nke Akụkọ InstagramDị njikere na ị họrọ "Akụkọ ọnọdụ".
Họrọ ma ọ bụ jide foto ma ọ bụ dekọọ vidiyo ịchọrọ iji na akụkọ ahụ.
Ugbu a pịa akara ngosi nke ọchị emoticon dị n’elu aka nri (nke yiri ya Denye ya ma ọ bụ dee) ma họrọ akara ngosi Ngụda.
Dee aha ngụda na mpaghara ederede kwekọrọ wee pịa «Kọwaa ụbọchị njedebe na oge » nke akara na ala. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịtọ oge, gbanyụọ nhọrọ ahụ Daybọchị niile ịgbanyụ mgba ọkụ ya.
I nwekwara ike mgba o iju nhọrọ iji nye ndị mmadụ ohere ịhụ nke gị storie dozie ihe ncheta ma kesaa na ịkọ akụkọ ha.
Iji rụchaa, pịa Njikere n’elu aka nri. Ị nwere ike gbanwee agba nke akara site na ịpị multicolored gburugburu na elu.
Ugbu a, tinye akara ebe ịchọrọ na ihuenyo ahụ, ịnwere ike gbanwee nha ya site na ịbelata ma ọ bụ ịgbatị mkpịsị aka abụọ na ya.
Mgbe ihe niile dị njikere pịa Akụkọ gị n'ala ala aka ekpe biputere akụkọ a.
You ga-ahụ na n'ime ụbọchị dị, ị nwere ike ịhọrọ ụbọchị ọ bụla nke afọ, na-enweghị mmachi ọ bụla gbasara oge. Enwere ike ịgụta ngwụcha ụbọchị niile ma ọ bụ maka oge.
Ọrụ ngụ oge nke Instagram abụghị usoro iheomume
Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ otu ị ga-esi mee ka ngụ oge otụ rụọ ọrụ ma ọ bụ na-ewere foto na-akpaghị aka mgbe ngụda inwe ike ịse foto na Instagram, ọrụ ahụ anyị kọwara n’elu Ee e Ọ ga - enyere gị aka, n’ihi na ọ bụ ihe dị iche. Gaghị enwe ike iji ngwa ọrụ a na mbipụta, naanị na akụkọ gị.
Dịka ị pụrụ ịhụ, Instagram na-etinye oge maka ihe ọhụụ na ihe na-atọ ụtọ site na ngwa. Dị ka a ga - asị na ọ naghị eri ahụ ... Obi abụọ adịghị ya, ọrụ ngụ oge Instagram bụ ngwa na-atọ ụtọ iji mee nke gị akụkọ enwe mmewere llamative, mara mma ma dị iche iche. O doro anya na ị ga-adọta uche gị anwụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet » Etu ịtọ oge ma ọ bụ ngụda na Instagram
Etu esi akwụ ụgwọ laptọọpụ gị na-enweghị chaja